बिल काका « Tuwachung.com
१. दाइजो होइन, असल बुहारी भए पुग्छ
२. काँग्रेस गाउँ कार्यसमिति सचिवदेखि जिल्ला उपसभापतिसम्म
३. अमेरिका बस्ने अवसर त्यागेका चाम्लिङलाई माओवादी केन्द्र नगर अध्यक्षको जिम्मेवारी
४. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाद्वारा चाम्लिङ भाषा पढाउने शिक्षक दरबन्दी सिर्जना
५. फिचर लेख्न खोज्नेलाई वरिष्ठ पत्रकार मोहन मैनालीका ‘टिप्स’
६. ‘काँग्रेस खोटाङका गणेशमान’ तेस्रोपटक सभापतिमा निर्वाचित
७. माओवादी केन्द्र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सम्मेलन मंसिर ११ मा
८. ४ महिनाको भेटी १२ लाख ८० रुपैयाँ
१०. पिल्मो राई : मौलिक भाषा, संस्कृति, इतिहास भएको अलग जाति
११. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजनीति दुर्छिमको कब्जामा
१२. यसकारण राई समुदायले बाख्राका मासु खाँदैनन्
कुसुम ज्ञवाली	२०७७ माघ १८, २१:३२
टिकट भयो बिल काका ?
हिजो कन्फर्म गरेको । ढेरै महँगो हुने यु नो ?, क्याटमाण्डु फ्लाइटको यति ढेरै माएले नतिरेको पैले ।
बिल काकाले जवाफ दिए ।
कतिपल्ट जानु भो नेपाल ?
ढेरैपल्ट गएको, डसपल्ट गएको । बिल काकाले भने ।
यसपल्ट के गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा ?
ढेरै घुम्ने, डेपुटी प्राइमिनिस्टर भेट्ने । स्नोमा क्याल्गरी नाबस्ने । कमिङ डसैँ नेपाल गएर सेलेब्रेट गर्ने यु नो ? काकाले भने ।
डेपुटी प्राइमिनिस्टर किन भेट्ने काका ? केही विशेष काम ? मैले सोधेँ ।
मेरो काम छएन, डेपुटी प्राइमिनिस्टरले याद कारेको मालाई । मेरो ढेरै मन परेको, उसको इन्टरेस्टड छ मालाई भेट्ने, त्यो क्याली ग्याण्डकीमा साँगै फिसिङ् कार्ने साठी डेपुटी प्राइमिनिस्टर भएको नेपालमा । उसलाई माइले पनि ढेरै मिस करेको । हामी गुड फ्रेन्ड पहेलेडेखि, नेपालमा गएको टाइमडेखि । उसको रिभोल्युसनरी आइडिया मालाई एकडम मान परेको । काकाले भने ।
बिल काका अर्थात् विलियम स्टुवार्ट, नेपालीहरूबीचमा परिचित एउटा गोरो अनुहार, खाइलाग्दो जिउ सत्तरी वर्षको उमेर, खैरा रांै पनि फुलेर सेता हुँदै गरेका । नेपाली संस्कृतिमा रम्ने एकजना रिडायर्ड प्राविधिक गोरे । नेपाली समुदायले मनाउने दसैं कार्यक्रममा आएर नाच्छन् साँस्कृतिक कार्यक्रममा । काकाको नाच भने अँग्रेजीपाराकै हुन्छ, तर हरेकजसो दसैंमा पुराना सौखिन ब्याले डान्सर काकाको नाचबाट मजा नेपालीले लिन पाउँछन् । रेसम फिरिरी गीतमा मञ्चमा काका नाच्दा नेपालबाट भर्खरभर्खर आउनुभएका आमाबुवाहरू दर्शकदीर्घामा निकै हाँस्नुभएको देखिन्छ तर ‘वान्समोर’ भन्ने नयाँ पुस्ताका भाइबहिनाहरूले निकै हौस्याउँछन्, काका मख्ख पर्छन् । नेपाली समाजका पुराना नेताहरू काकाको नाचले नेपाली सँस्कृति बिग्रो भनेर भन्थे, उनीहरूले पनि तारिफ गर्छन् काकाको अचेल ।
बिल काका रिटायर्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङका प्राविधिक हुन् । उनी स्थानीय नेपाली धेरैका साथी पनि । जसलाई जे परे पनि यथाशक्य सहयोगका लागि उनी तयार हुन्छन् । पर्वमा गरिने सामुदायिक कार्यक्रममात्र होइन, मलामी र जन्तीमा पनि काका छुट्दैनन्, नेपाली संस्कृति मलाई निकै मन पर्छ भनेर काकाले सधैंं भन्ने गर्छन् । उनलाई पनि नेपालका मान्छे निकै सहयोगी र सहृदयी लाग्छन् । उनलाई क्याल्गरीमात्र होइन, उनी जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पदयात्राका भट्टीपसल र उनले सहयोग गर्ने लालपुर गाउँका धेरै मान्छेहरूले पनि चिन्छन्, सम्मान गर्छन् र माया गर्छन् । उनलाई त्यसखाले हार्दिकताको नाताले ऊर्जा दिन्छ नेपाल जान ।
यहाँ क्याल्गरीको जीवन उनलाई निकै निरस लाग्छ । उनी भन्छन्– यहाँको जीवनमा रस छैन । उनले कस्तो रस खोज्छन्, जीवनमा भन्ने नबुझे पनि उनका नेपाली साथीहरूले सही थापिदिन्छन् । नेपाल जाँदा लालपुरका केटाकेटी बूढाबूढीलगायतका उनका धेरै साथीहरूलाई केही न केही न्याना लुगा उपहार पनि लैजान बिर्सन्नन् बिल काका, पहाडको जाडो बुझेका छन्, क्याल्गरीको हिटिङ सिष्टममा बसेर पनि काकाले । उनीले वालमार्टबाट किनेर वा साथीहरूसँग बटुलेर नेपालमा बाँड्न लैजाने लुगाको २ वटाजति सुटकेस तयार पार्छन् र लैजान्छन् नेपाल । बिल काकाले बा भन्न सुहाउने लालपुरका बूढा बाहरूले यसपाला गोरे आएन, त्यो मोराले ल्याइदेको जाकेट क्या न्यानो थ्यो, त्यो पनि फाट्न लाग्यो कैले आउँछ खै भनेर एकखाले प्रतीक्षा गर्छन् उनलाई लालपुरमा ।
बिल काका नेपाल जाँदा मेरो घरमा पनि पस्ने गर्छन् । खासमा मेरो घरै भने छैन नेपालमा । पैतृक सम्पत्तिको नाममा गुल्मीमा घडेरी र सानो बारी थियो तर त्यही बारी पनि आधा पैरोले लगेपछि आमालाई त्यहाँ बस्न डर भो भनेर स्थायी रूपले काठमाण्डुमै ल्याएँ मैले । उहाँको मन गाउँमा मान्छे काठमाण्डु, उहाँलाई धेरै कुरा मन पर्दैनथ्यो काठमाण्डुको तर सशस्त्र द्वन्द्वपछि अचेल धेरै गाउँलेहरू पनि काठमाण्डुतिरै बसाइँ सरेकाले ठिकै मान्न थाल्नुभएको छ । अपार्टमेन्टको कोठा सुविधा सम्पन्न छ आमाको । क्यानाडाको भिसा दुईचोटि अस्वीकृत भएपछि मेरा भाग्याँ रहेनछ क्यार क्यानाडा जान भनेर चित्त बुझाउनुभएको छ आमा । ज्योतिषीले भ्राम्मरीका दशा अझै दुई वर्षसम्म छ, त्यसपछि तपाईंलाइ भिसा मिल्छ भन्देको छ, त्यही भ्राम्मरीका दशाको समय काट्न दिन गनेर बझ्नुभएको छ आमा । नयाँनयाँ ज्योतिषीकोमा हेराउनुहुन्छ, अनि हरेका शनिवार पशुपतिमा गएर जल चढाउनुहुन्छ र क्यानाडाको भिसा माग्नुहुन्छ । बा बितेपछि आमा गाउँमै झन्डै पन्ध्र वर्ष एक्लै बस्नुभो, छोरा सँगसँगै बस्ने रहर त थियो तर भनेजस्तो भएन । मैले आमालाई पाल्न सक्ने अवस्था बन्दासम्म मलाई क्यानाडातिर लाग्ने अवसर पनि मिल्यो । काठमाण्डु आएर पनि आमालाई एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था भयो ।
आमाको कोठामा पाहुना आइरहन्छन् । मेरा साथीहरू यताबाट नेपाल घुम्न गए भने पनि एकपल्ट आमालाई भेटेर आउँछन्, आमाले पशुपतिको पर्साद ख्वाएर, आशिष दिएर पठाउनुहुन्छ क्रिश्चिएन गोरेहरूलाई पनि । सत्तरी वर्षकी पढाइ, लेखाइ नभएकी बूढी मान्छे तर निकै रहरालु हुनुहुन्छ आमा ।
आमा आफू स्कुल गएर पढेको सम्झना छैन । ठूलो मामाले सिकाएको रे अलिअलि कखरा पछि ‘पैला किताब’ आफैं पढेर सिके पढ्न भन्नुहुन्छ । उमेर ढल्के पनि उहाँमा उत्सुकता जवान छ, मैले स्मार्ट फोन किन्दिएपछि आमाले भाइबर र फेसबुक चलाउन सिक्नुभयो । फोटा खिच्न र अपलोड गर्न सिक्नुभएको छ मोबाइलबाट । पढेका, जागिर खाएर रिटायर्ड भएका उहाँका गाउँलेहरूले फेसबुक र भाइबर नजान्ने तर आफूले चलाउन जानेकोमा निकै गौरव छ उहाँलाई, यसलाई काठमाण्डुजस्तो जान्नेसुन्ने ठाउँमा बस्नुको उपलब्धि मान्नुहुन्छ आमा । पढेरमात्र हुन्छ र सीप हुनुपर्छ हाताँ भनेर फेसबुक, भाइबर नजान्ने दौंतरीहरूलाई छेड पनि हान्दा उहाँलाइ मज्जा लाग्छ क्यार ।
मलाई पनि भाइबरबाट फोन गरिरहनुहुन्छ । अरब र मलेसिया गएका मामा, भाइभतिजाहरूलाई पनि फोन गरिरहनुहुन्छ । सानीफुपूले सम्झना गर्नुभो भनेर उनीहरूले पनि आमालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा कलब्याक गरिरहन्छन् । आमाको फुर्सदिलो समयमा फोनमा पनि निकै बित्छ, मोबाइलमा धेरै पैसा लाग्ने मुगो हुने र’च भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ मसित, अब तपाईं जमानाजस्तो हुन्छ त मोहर मानो घ्यु खाने भनेर जिस्क्याइदिन्छु, उहाँ खित्का छोडेर हाँस्नुहुन्छ । आमाको फोन आयो भाइबरमा आमा मैले ढोगें । फोनबाटै खुट्टामा ढोग गरेकोजस्तो गरी भने ।
भाग्यमानी भएस् बा । आमाले फोनबाटै टाउकोमा हात राखेझैं गरेर आशिक दिनुभो ।
–के छ आमा खबर ?
–केही छैन । ढुंगेघरे मामा बितेछन् गाउँमा थाहा पाइस् कान्छा ?
–ए, के भ’को रहेछ ? मैले सोधें ।
–हातखुट्टा सुनिने, ज्वरो आउने भएको थियो रे । मान्छे गतिलो हो, भगुवानलाई चाहियो त्यो कान्छो पनि । निख्रिसके गतिला पुराना मान्छे । आमाले दिक्दारी पोख्नुभो ।
–अनि बिल काका पनि गए पदयात्रामा ? बीचैमा कुरो काटेर मैले सोधें, अर्थात् मैले प्रसंग बदल्न खोजेँ ।
–गए, आज दिउँसोको पिलेनमा पोखरा गए । तीन दिन बसे, यसपाला । मलाई पनि कपालमा लगाउने कालो ल्याइदिएको रहेछ । अम्रिकाने ओर्जिनेल राम्रोवाला ।
–तपाईंलाई त्यति भा’पछि पुग्यो ।
–यसो बिहे र वर्तन बोलाउँछन् दिदी र फुपू भनेर । जान परिहाल्यो । कपाल रंगाउन परेन, घरैमात्र बसिरहँदा पो परेन त । बाहिर निस्कँदा
भुतुंगे भएर निस्कन भयो त ? तेरो पनि त इज्यतको कुरा भो नि । कस्तो मुमाबडामहारानीजस्तो बनाएर पालेको रहेछ छोराले भनेर देखिन परेन गाउँछिमेकमा । आमाले आफ्ना पुराना तर्क गर्नुभो । मैले प्रतिवाद गरिनँ ।
–ल–ल राम्रो भो । जे दिए पनि उपहार त राम्रो मान्नुपर्छ । त्यही पनि सम्झेछन् बिल काकाले । मैले कुराको बिट मार्न खोजेँ ।
–सम्झिहाल्छ नि । त्यत्रो पढेलेखेको इन्जिनियर भा’को, खानदानी धनीमानी मान्छे पो हो त बिल काका, टुप्पाबाट पलाएकाहरू पो मात्तिएर खपिखानु हुँदैन त । लालपुरेहरूलाई त झन् दुई मधुसजति त कपडा ल्याएको रहेछ । दामीदामी सक्कली विदेशी जुगजाने लुगा । कस्ता राम्रा । यही फुर्सदमा पिलास्टिकका झोलामा सबलाई छुट्टाछुट्टै पोको पारेर दिनपर्ने मान्छेका नाम लेखेर । कति पाको हो त्यो गोरे । दुरान फर्काउने कुलघरानकी बुहारीले के गर्ली उति राम्ररी समान लिएर आएको । उत्ना टाढाबाट हेर त ।
–अहिले कहाँकहाँ जाने भन्थे ? मैले सोधेँ ।
–लालपुरमा यसपालिको दसैंमा टीका लाउने रे । उसको माइती मावलीजस्तै छ । मान्छेले पनि ज्यादै मन पराउने त्यो गाउँमा । जहाजमा सरगमाथा घुम्न जाने रे । पोखराको महँगो होटेलमा बस्ने रे, के–के हो के–के । कति पैसा रहेछ मोरासँग ? कैले नसकिने खर्च गरेर पनि । छोराछोरी पनि हुर्किसके काम गर्छन्, पढाइ सकेर भन्थ्यो ।
–हो पढाइ सकेर काम गर्दै छन् । मेरो घर पनि आएको छन् । निकै ठूला भैसके । बिहेचाहिँ भा’छैन क्यारे तीनैजनाको । मैले अथ्र्याएँ ।
–मनकारी दयालु मान्छे । लालपुरमा स्कुल खोल्न भनेर कुरा गरेछन् मान्छेहरूले उसले भवन बनाइदिने भएछ । ठेक्दार खोजेर काम पनि सुरू गराएछ । १२ लाख रे त्यो ५ कोठे एकतले छाप्रो बनाउन, गोरेले दिएछ । मनकारी साह्रै गुनिलो के त्यो मान्छे भगवानैजस्तो । आमाले तारिफलाई बीचैमा काटेर सोधें ।
–अनि अरू सामाजिक सेवाको के–के काम गरेछ । स्कुल बनाउन भनेर सप्ताह पुराण लगाएको रे, त्यसमा पनि ५० हजार चन्दा दिएछ । दीनबन्धु गुरूले जनै र माला लगाइदिएर सम्मान गरेको रे । अधिल्लो जुनीमा पण्डित हुनुपर्छ, कस्तो राम्रो भा’को सेतो कछाड र पहेंलो भोटो र निधारमा टीका बिल काकाको, दीनबन्घुले काकालाई मन्तर पनि सुनाएका रे । केको गोरे भन्ने पूरै नेपाली । आमाले लालपुरमा खिचेर काकाले ल्याएको फोटोको स्लाइड शो हेरेअनुसार नै भन्नुभयो ।
–अनि ऊ त म्लेच्छे हो नि । पूजामा आउन दिएछन् गुरूले ? त्यसरी । मैले आमालाई अत्तो थापेँ ।
–जनै लाइदिएर गुरूले मन्त्र सुनाएपछि केको म्लेच्छ हुनु नि कर्म चलिहाल्यो नि । हाम्रो हिन्दु धर्म सनातन धर्म भनेको त्यसै हो त नि, सबै अटाउँछन् । जसले श्रद्धा गरेर आयो त त्यसलाई अस्वीकार गर्न हुन्न । आमाले हिन्दु धर्मको बारेमा आफ्नै मौलिक धारणा राख्नुभो मैले केही भनिनँ ।लालपुर पहाडको गाउँ, खेतिपाती हुने न धेरै जाडो न धेरै गर्मी । विकासको नाममा २ कोठे स्कुल र अहिले पानी नआउने पानीका धारा र मोटर नआउने मोटरबाटो । हिउँदमा चुनावताका ट्रेक्टरसम्म ल्याएका थिए रे पछि डोजर पनि गयो ट्र्याक्टर पनि गयो चुनाव पनि गयो कोही फर्केन गाउँमा ।
गाउँमा पुगेर केही न केही सहयोग, सेवा गर्ने हुनाले बिल काकालाई गाउँलेहरूले गाउँकै आफन्त मान्छन् । अघिल्लो महिना एकजना युरोपेली पर्यटकलाई लुटपाट गरे भन्ने सुनिएको थियो लालपुरमै । धर्म प्रचार गर्न खोज्यो भनेर केही युवाहरूले पिटेछन् र बाइबलका किताब खोसेछन् । स्थानीय बूढापाकाहरूले किताबको अपमान गर्न हुन्न भनेर ढोगेर रामनामी पछ्यौरा ओढाएर कालीगण्डकीमा बगाएका रे । बिल काकालाई भने यो आफ्नै घरगाउँजस्तो छ ।
गाउँमा जानुमा बिल काकासँग कुनै निहित स्वार्थ छैन । गाउँलेले माया गर्छन्, त्यति हो उनको लगाव । प्रेममा शक्ति हुन्छ भन्छन् बाह्र हजार किलोमिटर परबाट बिल काका यहाँसम्म त्यसैले तान्दो हो । बिललाई लालपुरका गाउँलेको धेरैजनाको नाम थाहा छ । हुन त उनी उति शुद्धसँग नाम उच्चारण गर्न सक्दैनन् तर पनि मान्छेलाई नामैले बोलाएपछि हुने एकखाले हार्दिकताको लगावको बारेमा उनी पूरा जानकार छन् ।
हिउँदे धान रोप्ने बेला थियो, मिसिन बिग्रियो गाउँको एकमात्र पम्पिङसेट चलेन । तल खोलाबाट पम्पिङसेटले पानी तानेर रोपाइँ गर्न थालेको केही वर्षमात्र भएको थियो । भरिया लगाएर बडो महँगो तेल किनेर सहरबाट ल्याएर सरकारले दिएको पम्पसेटबाट पानी लगाएर धान रोप्दा बूढापाकाहरू भगवान्को लीला भन्थे । पम्पिङसेट एउटैमात्र हो गाउँमा जडान भएको तर सबैजसो पार्टीका स्थानीय नेताहरूले हाम्रो पार्टीले मिलाइदिएको पम्पिङसेट लालपुरलाई भनेर क्रेडिट लिन खोज्थे । त्यसमा गाउँलेहरूलाई कुनै निदिखुदी थिएन । जब पम्पिङसेट बिग्रियो, सबै पार्टीको अफिसमा उपभोक्ता समिति गएर उभिए, जिल्ला नेताहरूलाई भेटे समस्या समाधान भएन । त्यो बनाउन निकै खर्च लाग्ने बोकेर सहर लैजान र ल्याउनपर्ने भन्ने कुरो आयो । यत्तिकैमा यसपल्ट बिल काका पुगे । उनले पम्प चलाउने डिजेल इन्जिनको समस्या सुनेपछि काकाले तीन दिन लगाएर मेहनत खोलखाल जोडजाड गर्दा मेसिन बन्यो । गाउँलेहरूले खसी काटे राति भोज र नाचगान गरे बिल काकाको सम्मानमा । बिल काकाले यसपल्ट आफ्नो नयाँ आइफोनमा भिडियो पनि खिचे । क्याल्गरी फर्केपछि डकुमेन्ट्री नै बनाउने योजनासमेत गरे । गाउँमा भोलिपल्टबाट रोपाइँ सुरू भयो । उनी खोक लगाएर हिलोमा पनि खेले । जीवनमा निकै रोमाञ्चक लाग्छन््, यस्ता पल काकाका लागि । रोपाहारसँग खाजा पनि खाए खेतमै बसेर । उनले क्याल्गरीको पश्चिमपट्टि रहेको ब्याम्फ न्यासनल पार्कमा क्याम्पिङ जाँदा भन्दा कता हो कता आनन्दको अनुभूति भयो यो आउटिङ ।
काका नेपाल आउँदा आफूलाई चाहिने र चाहिन सक्ने थुप्रै प्रकारका औषधिको पोको पनि लिएर आएका हुन्छन्, त्यो पनि जाने बेला उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्वारचन ठूल्बालाई दिएर जान्छन्, त्यो पनि लाखै हुन्छ अभावको बेला । गाउँका पण्डितले गीताको श्लोकमा धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामी युगेयुगे भनेर कृष्ण भगवान्ले भनेको हुनाले भगवान् गोरेका रूपमा पाल्नुभएको हो भनेर ठोकुवै गर्छन् काकाका बारेमा । लालपुरमा बिल काकालाई मन्दिर जान पनि छुट छ । राति भजनमा पनि बिल काका नाच्न चुक्दैनन् । उनको अंग्रेजीपारामा चाक हल्लाएर भजनमा नाच्दा पनि भजन गाउने भक्तिले साह्रै राम्रो भनेर तारिफ गरिदिन्छन् । बिललाई सधैं लालपुरमा बस भनेर भन्ने गाउँलेहरू मात्र होइन छोरालाई लुगा ल्याइदिने गोरे जान लाग्यो भनेर आँखा रसाउने गरिब आमाहरूको हार्दिकताभन्दा ६ महिनाभन्दा बढी बाहिर रहे क्यानाडा सरकारले दिने पेन्सन प्राप्त नहुने समस्याले पुन क्याल्गरी तान्छ । काका क्याल्गरी फर्कंदा मेरी आमालाई भेटेर आएका रहेछन् । के भारी बोकाउने त्यत्रो ठूलो मान्छेलाई भनेर आमाले मलाई केही पठाउनुभएनछ । छोरालाई अलिकति माया गर्दिनेबित्तिकै मेरी आमालाई त्यो मान्छे एकदम गतिलो हो भन्ने पर्छ । मेरो आमा र लालपुरका मान्छेका आसयमा भन्ने हो भने भगवान्जस्तो मान्छे यसपल्टको लालपुर भिजिट सकेर बिल काका क्याल्गरी फर्के ।
दुई वर्षका लागि बिग्रेका आमाका भ्राम्मरीका दशा छ, महिनाभित्रैमा सप्रेछन् यसपल्ट भिसा लाग्यो । क्यानाडा आउने हुनुभो आमा । देखिस् पशुपतिमा जल चढाएपछि कति चाँडै भिसा लाग्यो ? आमाले भन्नुहुन्छ । भूकम्पपीडित आफन्तहरूको परिवारका सदस्य क्यानडा आउन निवेदन गरिराखेको छ भने यथासम्भव चाँडै भिसा दिनेगरी क्यानडियन संघीय सरकारले गरेको निर्णयका कारण तपाईंको भिसा लाग्यो भन्छु मैले । हो, त्यही भनेको, त्यो निर्णय गर्न उनीहरूलाई भगवान्ले बुद्धि देको हो बुझिस् भनेर आमाले मलाई जितेको अनुभूति गर्नुहुन्छ । म चुप लाग्छु, मलाई आमासँग यसरी हार्नमा औधी आनन्द हुन्छ । यो हप्ता आमाको टिकट पनि भयो ।
उहाँलाई क्याल्गरीमा बिल काकाको घर पनि हेर्ने रहर छ । कस्तो होला बिलजस्तो असल मान्छे भएको त्यो सहर, आमालाई निकै उत्सुकता छ । सायद आमा सोच्नुहुन्छ– सबै गोरामात्र बस्ने त्यो सहरमा बिलजस्तै असलै असल मान्छे भएको त्यो स्वर्गजस्तो सहर हुनुपर्छ । आमालाई छेड हानेर भन्छु– आमाका भगवान्ले स्वर्ग पृथ्वीमा बनाउने कुनै प्रोजेक्ट सुरू गरेका छैनन् । आमाले पनि छोराले बिल्ला गरो भन्ने बुझेर हाँस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– तँ माने मान नमाने नमान तेरा बाले सिकाएको धर्म र देउता म नमरून्जेल मान्छुमान्छु । म खालि हाँसीमात्र रहन्छु ।
मैले यो शनिवार बिल काकालाई खान बोलाएँ । ढिँडो र मोहीको ट्वाक्कको सोल्लर बिललाई खाने बानी नै परेको छ नेपालमा । मैले पनि त्यही बनाएँ । बिल खाना खान आउँदा कुनचाहिँ वाइन ल्याउँ भनेर सोधेका थिए । हामी अल्कोहल, सुर्ती र माछा र मासु नखाने भनेपछि के ल्याउन उपयुक्त हुन्छ भनेका थिए । मैले केही नल्याउँदा पनि राम्रो देखिन्छ भने तर इन्डियन मिठाइ पसलबाट लड्डुको पोको त ल्याइछाडेछन् । काकालाई अंग्रेजीमा बोल्न भन्छु मैले किनकि यो उनलाई सजिलो हुन्छ, बरू मलाई उनका कुरा उल्था गरेर सुनाउन मज्जा लाग्छ ।
–तपाईंको घर–जग्गा कता छ यहाँ ? आमाले काकालाई सोध्नुभो उल्था पनि गरिदिन्छु तर कति कुरा काका आफैं पनि बुझ्छन् ।
आमाको प्रश्नको आसय पनि म बुझ्छु तर काकालाई बुझाउँदिनँ । आमाले सोध्न खोजेकोचाहिँ थुप्रै जग्गाको जमिनदार हुनुपर्छ ।
–मेरो जग्गा छैन कोन्डो छ, दुई बेडरूमको । काकाले भन्छन् म आमालाई उल्था गरिदिन्छु ।
–त्यो डाउन टाउनमा थिए नि ३०/४० तले घर, त्यसलाई अंग्रेजीमा कोन्डोमिनियम भन्छन््, त्यसैलाई छोटोमा कोन्डो भनेको भनेर आमालाई बुझाउँछु ।
–ए त्यत्रो ठूलो घर छ काकाको ? आमा छक्क पर्नुहुन्छ ।
–त्यो सबै घर होइन आमा हामी बस्ने अपार्टमेन्टजस्तै २ कोठा उसको भनेको । मैले अथ्र्याउँछु ।
–अनि २ कोठामात्रै उसको, अरू भाडामा देको ? आमाले सोध्नुभयो ।
–होइन आमा, उसको भनेकै त्यति । बिलजस्ता सयौं मान्छेको साझा घर हो त्यो अग्लो बिल्डिङ ।
बिलको त्यतिमात्र हो, घर छैन भन्दा आमालाई पत्याउन निकै गाह्रो भयो । खेतबारी, भेडा फाराम केही होला नि अरू भनेर पनि सोध्नुभयो आमालाई पत्यार नलागेर ।
–सबै पैत्रिक सम्पत्ति बेचेको बिलले ?
–बिलसँग धेरै सम्पत्ति होइन मनकारी छातीचाहिँ छ, उनका बाबु युरोपबाट बसाइँ सरेर आएका ज्यामी थिए । जति पैसा छ ऊसँग, उसले मेहनतले कमाएको । ऊसँग भएजति पैसा यहाँका धेरैजसो गोरेसँग हुन्छ । उनीहरू साँच्दैनन् बस खर्च गर्छन्, त्यसैले उनीहरूसँग धेरै पैसा भएकोजस्तो लाग्छ ।
मैले नेपालीमा बुझाएको कुरा बिलले केही त पक्कै बुझे होला । उसले पनि थप्यो ।
–मसँग धेरै पैसा छैन । मेरो पेन्सनले मलाई पुग्दैन कोन्डोको मोर्टगेज तिर्न म हप्तामा ३÷४ रात काम गर्छु ।
–केको रिन रहेछ र ? आमा तीनछक पर्नुभो ।
–त्यही दुईकोठे घरको ऋण ?
–कति हुन्छ र त्यति २ कोठेको पनि ? आमाले सोध्नुभयो ।
–नेपाली ४ करोड ।
–४ करोड, मेरा बाबै कति महँगो त ? आमा ज्यादै अचम्मित हुनुभो ।
–छोराछोरीले नि सहयोग गर्दा हुन् नि ऋण तिर्न ।
–अहँ, यहाँ यस्तो चलन छैन । उनीहरूको आफ्नै घरको पनि मोर्टगेजको भारमा यसैगरी थिचिएका हुन्छन्, आमाबासँग सँगै बस्दा पनि बस्दैनन् १८ वर्ष पुगेपछि ।
आमालाइ तिरिमिरी भयो बिलका कुराले । एकपछि अर्को झड्का दिएजस्तै भयो जानकारीले । आमा ट्वाँ पर्नुभो । गफगाफ लामै भयो । सामान्यतया व्यक्तिगत कुरो सोध्नु भन्नु उति स्वाभाविक मानिदैन यहाँ तर पनि बिल नेपाल गएको र नेपाली बानीपानी बुझेको हुनाले उसले आमाका प्रश्नको जवाफ दिइरह्यो, उसले असहज मानेन । रातिको पौने दस बज्दा बल्ल घाम अस्ताउँदै थियो । जाडो थिएन बाहिर । आमा स्वयम्सँग कुरा गरिरहेझंै चुपचाप हुनुहुन्थ्यो । बिललाई मैले आइदिएकोमा सधन्यवाद बिदा गरेँ ।
बिल गएपछि मैले कोठा भान्सा मिलाउनतिर लागेँ तर बिलका बारेमा हामी कुरा गरिनै रह्यौं । मेरी श्रीमती कामबाट बाह्र बजे फर्किने हुनाले धेरैजसो साँझको काम म आफैं गर्छु । कहिलेकाहीं हामी आमाछोरा गफ गर्दै बस्छौं श्रीमती फर्कने बेलासम्म अनि आमाले तिमीलाई पर्खेर बसेको भनेर कुरा मिलाउनुहुन्छ ।
–स्वास्नीनी मरेकी हो बिलकी ? आमाले मलाई सोध्नुभयो ।
–होइन, पोइल गा’की ।
–नेपालमा देउताजस्तो मान्छन् बिललाई, यस्तो असल मान्छे छोडेर पोइल हिँडिछ बुढेसकालमा नखरमाउली । नेपालमा मैले बिहे गर्छु भन्ने हो भने लाइन लाग्थे यै बिल बूढासित बिहे गर्न पनि । देउताझैं मान्छन् केरे लालपुर गाउँमा यसलाई । यहाँ एक्लै रहेछ विचरा । आमाले भन्नुभयो ।
–मन परेन होला आमा । हामीलाई राम्रो लाग्ने मान्छे उसैकी स्वास्नीलाई राम्रो लागेन होला ।
–हुन त माल पाएर चाल नपाउने आइमाई पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् नेपालमा पनि यता पनि हुँदारहेछन्् भन्न परो । आमाको बिल काकाका पनि कमजोरी होलान् भनेर एकछिनका लागि मान्न पनि तयार हुनुहुन्न ।
–छोराछोरी किन अन्तै बसेका नि ।
–बिहे नहुँदै केटा र केटी सँगै बस्न बच्चा पाउन पाइने कानुन छ आमा यहाँ । त्यस्तोलाई कमन ल पार्टनर भनिन्छ ।
–छ्या के कानुन होला त्यस्तो ? आमाले नाक चेप्य्राउनुभयो ।
–त्यस्तो भेडाबाख्राजस्तो चलन रहेछ है गोरेहरूको आमाले भन्नुभो । आमाको दिमाग अझै पनि घुमेको घुम्यै छ ।
–विदेशीहरूको चलनचल्ती के–के न हुन्छ भनेझैं गरेर सिको गर्थे त हाम्रा गाउँका केटाकेटीहरू, के चलन हो के सँस्कृति हो त्यस्तो पनि ?
–अफिसचाहिँ कता हो बिलको ? आमाले सोध्नुभो मलाई ।
–डाउनटाउनमै छ, उसले रातभरि काम गर्छ । सोमवार, बिहीवार, शनिवार र आइतवार । ऊ मेसिनको मर्मतसम्भार विशेषज्ञ हो । पैसा राम्रै कमाउँछ आमा बिलले मैले भने ।
–रातभरि नसुतेर काम गर्ने ?
–दिउँसो सुत्छ नि त ।
–निद्रा लाग्दैन ?
–लाग्छ, लागेर सुत्न भएन । त्यत्रा ठूला बिल्डिङमा एकछिन लिफ्ट चलेन भने पनि चौपट हुन्छ । जाग्रामै बस्नपर्छ आमा ।
आमालाई यो सहर स्वर्गजस्तो लाग्न छोड्यो अब । भेडाबाख्राको सहरजस्तो लाग्न थालिसकेको थियो । उहाँले एकछिन टोलाएर भन्नुभो ।
–मर्ने बेलामा न छोराछोरी साथमा न श्रीमतीसँगै । कति दुःखी रहेछ हगि यो बिल काका भन्ने मान्छे । तर, कस्तो हाँसिखुसी कस्तो चल्ताफुर्ता । दुःखको कुरा कहीं कतै पत्ता लाग्दैन उसलाई हेरेर । आमाले भन्नुभयो ।
–खै कसरी जानु आमा बिल यसमा खुसी छ कि दुःखी ? माछालाई चिसो पानीमै बस्न रमाइलो, सुँगुरलाई हिलो आहाल प्यारो, चौंरीलाई त्यो हिउँको सिरेटो नै राम्रो कि कसो आमा ? आमाले केही गहिरो कुरो बुझेझैं गरेर मुन्टो हल्लाउनुभयो ।
–त्यत्रो चार करोडको ऋण एक्लैको थाप्लामा मर्ने बेलामा दुःखकै कुरा हो नि हैन र कान्छा ? अनि किन नेपाल नेपाल लगेर पैसा बाँड्छ त बिलले ? आमा अलिकति दिग्दार लागेजस्तो देखिनुभयो ।
–दान गर्ने भनेको आफूलाई धेरै भएर होइन नि, गाँस काटेर आफूले दैनिक गर्ने खर्च कम गरेर गर्ने हो । जुन कुरामा आनन्द छ, त्यो गरेको कुरा हो नि । रक्सी खाने मान्छेले खानेकुरा किन्ने पैसा कटाएर पनि रक्सी किन्छन्, त्यसमा आनन्द छ । बिलले नेपालमा दान दिने कसैलाई देखाउन हैन, मनको आनन्दका लागि हो, मैले आमालाई बुझाउन खोजेँ ।
–त्योभन्दा त आफ्नै रिन तिरे हुन्तो मर्ने बेलामा आफ्नै हाड सुकिला हुन्थे भन्ने मेरो कुरो । आमाले तर्क गर्नुभो ।
–बैंकले घर लिलाम गरेर पैसा असुल उपर गरेर उसको ऋण चुक्ता हुन्छ, यदि ऋण नतिरी मर्यो भने, आमा बिलले कसैको खाएर मर्न पर्दैन । मैले यहाँको प्रचलित आर्थिक अभ्यास व्याख्या गरेँ ।
–सधैं काममा जान पर्ने जति बूढो भए पनि । एक–दुई दिन महिनाको कुरो भएन । खै त बिलले सुखसँग बस्ने दिन कैले आउनन् त ?
–कामैमा रमाइलो मान्छन् आमा गोरेहरू । काम भएन भने बरू यिनीहरूलाई न्यास्रो र नरमाइलो लाग्छ भन्छन् । हुँदाहुँदा हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्न थालिसकेको छ अचेल । मैले बुझाएँ ।
आमा धेरै बेर घोरिनुभयो बिलको जीवनका पाटाहरूमा । आफ्नैसँग तुलना गरेर भन्नुभो न मेरो एक पैसाको ऋण छ । बरू बेंकाँ थोरै भा पनि पैसा छ । पहिराले खाएको भए पनि सानो बारी छ । पुरानै भए पनि गाउँमा मेरै नामको लालपुर्जा भएको घर छ । रातविरात अनिदो बसीबसी काम गर्न पर्दैन । अहिले तेरा बाउले छोडेर गएको पैसाले बसीबसी खान पुगेकै छ । छरछिमेक, नालनाता जताततै सेनी फुपू भनेर मानमनितो छ । विदेश गएर आएकी भनेर समाजले गन्छ मलाई । ढोकामा हात पसार्न आउनेलाई रित्तो पठाउन परेको छैन, कसैलाई चित्त दुखाएर पैसो हात पार्न परेको छैन ।
म त धेरै सुखी रहेछु बिल काकाभन्दा त हगि कान्छा आमाले स्वाभाविक ढंगले भन्नुभयो म निदाउनै लागेको तन्द्रामा थिएँ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजनीति दुर्छिमको कब्जामा
दुर्छिम (खोटाङ) । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजनीति दुर्छिमको कब्जामा रहेको बताइन्छ । नेकपा एमाले, माओवादी
सांसद भट्टराईलाई आहा ! लागेको रेग्मीटार
रेग्मीटार (खोटाङ) । प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई रेग्मीटारदेखि मोहित भएका छन् । ‘आहा रेग्मीटार !,’
४ महिनाको भेटी १२ लाख ८० रुपैयाँ
हलेसी (खोटाङ) । हलेसी आइपुगेका दर्शनार्थीले चढाएको भेटी गणना गर्दा १२ लाख ८० रुपैयाँ संकलन
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित नेपाली काँग्रेसको साधारण सदस्यता हात पर्यो । साधारण सदस्यता पाउँदा उनी